Rtoa Fanirisoa Ernaivo –Famokarana angovo: « Tokony hojerena ny fanokafana malalaka ny fifaninanana » | NewsMada
Rtoa Fanirisoa Ernaivo –Famokarana angovo: « Tokony hojerena ny fanokafana malalaka ny fifaninanana »
Mpikambana iray ao anatin’ny “Alliance pour l’industrialisation de Madagascar” ny Fiombonan’ny sendika eto Madagasikara (SSM), izay Rtoa Fanirisoa Ernaivo no filohany. Amin’ny maha kandida azy amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena, nilaza ny heviny izy momba ny tontolon’ny indostria.
*Gazety Taratra : Namoaka ny vokatry ny fanadihadiana natao iny ny mpikambana rehetra miasa ho an’ny indostria, anisan’izany ianareo ao amin’ny SSM, ahaona ny fijerinao ny zava-misy ankehitriny ?
-Rtoa Fanirisoa Ernaivo : Dimy izahay : ny Sim, ny Fivmpama, ny Crem, ny CTM, ary ny SSM no ao anatin’ity « Alliance » ity, fitaovana fandrefesana ny momba ny indostria. Voalohany, napetrakay ny lalàna momba ny indostria; faharoa, mandrefy ny sehatra maro izahay isaky ny telo volana. Koa hita izao fa tena mbola ratsy toerana ny indsotria eto amintsika. Tanjona ny hampiakatra izany, hahazoana mampandroso kokoa ity sehatra ity.
*Ratsy toerana, hoy ianao, ny indostria eto an-toerana, ny antony mahatonga izany ?
-Sakana iray lehibe tsy mampandroso ny indostria ny hetra sy ny fadintseranana. Ambony loatra ny hetra sy ny tahan’ny fandintseranana, ka mampisy olana goavana ho an’ireo mpandraharaha. Ny tenako amin’ny maha mpilatsaka ho fidina ahy, anisan’ny fandaharanasako izay hetra sy fadintseranana izay, satria io no mahatonga ny kolikoly rehefa ambony loatra. Lasa “mifampiraharaha” any ambadika any ny maro. Raha, ohatra, rariny mandrisika ny olona hampiasa vola izany sady ady amin’ny kolikoly.
*Nasongadina ho sakana iray lehibe koa ny angovo, ny vahaolana hoentinao amin’izay ?
– Ny Jirama no tena mamokatra ny angovo eto amintsika, na misy ihany aza ireo sehatra hafa Amiko tokony hojeren’ny fanjakana ny fanokafana malalaka ny fifaninanana eo amin’ny famokarana angovo fa tsy mametra izany ho ny Jirama irery . Tokony hitovy amin’ny fifaninanana momba ny fifandraisan-davitra ireny ny angovo. Ao anatin’ny fandaharanasako ny hampitombo ny famokarana angovo hisian’ny fampandrosoana maharitra sy hampihena ny vidiny, indrindra hahenika an’i Madagasikara.
*Momba ny angovo ihany, naroson’ny INSTN fa mila angovo nokleary isika raha te handroso marina, ny hevitrao ?
-Ny Profesora Raoelina Andriambololona, miady mafy ny hametrahana io angovo nokleary io, ary ataoko fa mampalahelo raha ny manampahaizana malagasy toy ireny, ankatoavin’izao tontolo izao ny fahaizany, notsinontsiniavina fotsiny raha afaka mitondra ny anjara birikiny ho an’ny fampandrosoana ny firenena. Koa amiko tokony hodinihina izay fametrahana angovo nokleary izay. Betsaka ny mampiasa izany ireo firenena mandroso ireo.
*Raha miresaka ny tsy fandriampahalemana ianareo, amin’ny lafiny halatra sa krizy politika ?
-Mahatonga io tsy fandriampahalemana io ny fahantrana, tsy hajain’olona intsony ny rafi-panjakana misy. Raha ireo mpitandro filaminana maro be eto Antananarivo, hapetraka any amin’ny toerana anjakan’ny tsy fandriampahalemana, mety ho voavaha ihany ny olana. Fa raha mijery lavitra isika, io ady amin’ny fahantrana io ny vahaolana maharitra. Rehefa misy ny lalana, mazava ny tanàna, mihena ny tsy fandriampahalemana. Ny krizy politika mateti-pihavy kosa, miankina amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra. Noho izany, mila tontolo azo antoka sy milamina ny mpampiasa vola. Manana ny lalàna momba ny fifaninanana isika nefa tsy ampiharina. Mila amboarina io lalàna io, aroso eny anivon’ny Antenimiera.